Soo dejisan Megapolis 3.30 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Megapolis
Megapolis – kulan istaraatijiyad horumarinta ee magaalo yar oo u megalopolis weyn. Ujeedada ugu weyn ee ciyaaryahan uu yahay horumarinta kaabayaasha iyo kordhinta tirada dadka magaalada. In Megapolis ku jiraan dhismaha nooca iyo ujeedada kala duwan kuwaas oo diyaar u ah dhismaha dhulka iyo biyaha. Markii ay ciyaarta ka soconayo ciyaaryahankii ugu soo gebogebeeyay qandaraasyada, ururiya faa’iidada, koriyo khayraadka iyo u qabata hawlo kale si ay u helaan abaalmarino iyo hagaajiyo xaaladda magaalada. Megapolis kuu ogolaanaya in aad si tartiib tartiib ah loo ballaariyo dhulka magaalada oo ku dhameysan dhismaha ka mid ah dhismayaashii kala duwan oo ku yaal magaalada dibaddeeda ah. Megapolis sidoo kale awood u si ay u helaan iyo in la caawiyo ciyaartoyda kale si loo hagaajiyo magaalooyinkooda.
Sawiro 3D iyo tayo leh oo lagu faah faahinayo oo alaab ah
Fursadaha Wide dhinacyo kala duwan ee horumarka magaalada
Dhismayaal badan oo la heli karo ujeedooyin kala duwan
Tiro weyn oo ka mid ah hawlaha
Horumarinta Joint magaaladii iyadoo ciyaartoyda kale
Soo dejisan Megapolis
Faallo ku saabsan Megapolis
Megapolis Xirfadaha la xiriira